नेपालको सन्दर्भमा समाजवाद : समाजवाद कि सत्यानाश ? - Namaste Post
नेपालको सन्दर्भमा समाजवाद : समाजवाद कि सत्यानाश ?
राम कार्की २०७६, ८ आश्विन बुधबार १२:३२ 0
एन्टोनियो ग्राम्स्कीको एउटा भनाई छ,“The crisis consists precisely in the fact that the old is dying and the new cannot be born.”। उनी त्यतीवेलाको युग सन्धि अर्थात, एउटा युगको अन्त्य भएर अर्को नयाँ युगको सुरुवात हुने स्थिति, वा त्यो संक्रमणको समय सबैभन्दा बढी कठिन भएको बताउँछन्। हो, संक्रमणको समय निकै कठिन, संकटग्रस्त नै हुन्छ। नेपालमा पुराना थुप्रै चिजहरु मर्दैछन् तर, नयाँ चिज जन्मिएको पनि छैन।। पुरानो संस्कृति, पुरानो चालचलन, पुरानो सम्बन्ध र पुराना मान्यताहरु थुुप्रै भत्किएका छन् तर, त्यसको ठाउँ नयाँले लिन पनि भ्याएको छैन। यस्तो स्थितिमा अब समाज अगाडि कसरी जान्छ त?
यो समाज स्वतहः समाजवादतर्फ जाँदैन, संविधानमा लेखिदिएर समाजवाद कायम हुँदैन, आउँदैन। त्यसका लागि वास्तमा अब समाजवाद के हो भन्ने परिभाषित गर्नुपर्छ।
१९औँ शताब्दीको अन्त्यतिर हेर्दा मार्क्सवादलाई स्वभाविकजस्तो हिसाबले बुझिन्थ्यो। जसरी सामन्तवादभन्दा पछि पुँजिवाद आयो त्यसरी नै सोतहः पुँजिवादभन्दा पछि स्वस्फूर्त नै समाजवाद आउँछ भन्ने ढंगले व्याख्या भइरहेको थियो। त्यतिवेला लेनिनले एउटा नयाँ व्याख्या ल्याउनुभयो। खासमा माक्र्सले क्रान्तिकारी संज्ञानलाई अगाडि ल्याउनु भएको थियो भने, लेनिनले चाहीँ क्रान्तिकारी एक्सनलाई अगाडि ल्याउनुभयो। माक्र्सवादलाई रेभुलस्नरी अभ्यासमा ल्याउनुभयो।
व्यक्ति, पात्र वा घटनाको निन्दाले मात्रै हाम्रो बाटो अगाडि जाँदैन। यो समाजलाई हामीले बेस्सरी हस्तक्षेप गर्न सकेनौँ भने यसको पछाडि बर्बरता आउँछ। जस्तो माक्र्सवादभित्र ग्राम्स्कीलाई लेनिन पछाडिको सबैभन्दा ठूलो बौद्धिक मानिन्छ । तर, उनकै देश इटलिमा फाँसिवाद आयो। जर्मनिमा फाँसिवाद आयो, नाजीहरुले शासन लिए। त्यसैले अहिले हाम्रो जुन संक्रमण छ, यसबाट समाजवाद पनि आउनसक्छ, सत्यनाश पनि हुनसक्छ।
यो समाज स्वतहः समाजवादतर्फ जाँदैन, संविधानमा लेखिदिएर समाजवाद कायम हुँदैन, आउँदैन। त्यसका लागि वास्तमा अब समाजवाद के हो भन्ने परिभाषित गर्नुपर्छ। हामी यसमा सजग बनौँ यसपछि ठूलो दुर्घटना पनि आउनसक्छ, जसरी इटलि र जर्मनिमा आयो। पहिले जर्मनमा नाजीहरुभन्दा कम्युनिष्टहरुको संख्या बढी थियो। कम्युनिष्ट पार्टीहरु आपसी कलहमा नलागेको भए नाजीहरुले जित्न सक्दैन थिए। उनीहरुले जितिसकेपछि फाँसिवाद आएको हामी सबैले देखेको कुरा हो। हामीले पनि लगाएको यो समाजवाद भनिएको रबरको जुन टोपी छ, यसलाई परिभाषित गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
इतिहाँस रिफ्रेन्सको रुपमा काम लाग्छ। इतिहाँसले वर्तमानमाथि शासन गर्न थाल्यो भने त्यो समाज समाप्त हुन्छ। वर्तमानको सेवाका लागि इतिहाँसका शिक्षाहरुलाई लिने गर्नुपर्दछ। जस्तो कि लेनीनले नै ल्याएको संगठनात्मक, राजनीतिक सिद्धान्तको हविगत के भयो भनेर हामीले हेर्नैपर्छ। ‘सेल्फ अर्गनाइजेसन’ र ‘भेंगार्ड’। रोजा लक्जम्बर्गको चिन्ता छ, ‘कि तिम्रो समाजवादको डोजले सेल्फ अर्गनाइजेसन खतम भयो भने, मजदुर, किसान, शोषित पीडित जनताले आफ्नो लड्ने क्षमता गुमायो भने ???’ लेनीन भन्छन, ‘कि समाजवादको चेतना बाहिरबाट दिनुपर्छ, भेंगार्डले नै दिनुपर्छ।’ हाम्रो आन्दोलनमा पनि हामीले त्यो बोक्दै आएका छौँ। अहिले पनि हाम्रो पार्टीलाई तिमीहरुको संगठानत्मक सिद्धान्त के हो भनियो भने, जनवादी केन्द्रीयता नै भन्छौँ। हामीले केही शुत्रहरु कण्ठ पारेका छौँ, ‘अल्पमत बहुमतको अधिनमा हुन्छ’ ‘तल्ला कमिटीहरु माथिल्ला कमिटीका अधिनमा हुन्छन्’, यस्तै। अब हामीले खोज्नुपर्‍यो, नयाँ पीढीले पढ्नुपर्‍यो ‘लेनीनले कुन परिवेशमा जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त ल्याए?, उनको विरासत के थियो?, अवस्था के थियो? र उनले माक्र्सवादलाई कसरी बुझेका थिए?’ मार्क्सवादलाई वर्णस्कीले कसरी बुझेका थिए?, काउत्सकीले कसरी बुझेका थिए र लेनीनले कसरी बुझेका थिए? र त्यसको ऐतिहाँसिक सन्दर्भ के थियो?
मोहनबिक्रमको अण्डरमा पनि काम गरियो, मोहन वेद्यको अण्डरमा पनि काम गरियो, अहिलेका चल्तापुर्ता नेताको मातहतमा पनि रहेर काम गरियो तर, जनवादी केन्द्रीता काहीँ देखिएन।
राष्ट्रियताको कुरामा लेनीनले रोजालाई बारम्बार भनेका छन्, ‘तिमी बुझ्दीनौँ।’ जबकी रोजालाई मार्क्स पछाडिको सबैभन्दा राम्रो ब्रेन हो भनिन्छ। तर रोजा स्वयं जर्मनको समाजवादी आन्दोलनको सफलताका कारण बढी उत्साहित थिइन्, उनका लेखहरुमा पनि त्यो देखिन्छ। किनभने सबै देशका पार्टीहरुले त्यसलाई आदर्श मानिरहेका थिए। लेनीन बारम्बार जर्मनको उदाहरण दिन्छन्। लेनीन व्यक्तिगत हिसाबले एकदमै दयालु, असाध्यै संवेदनशिल, यतिसम्म कि ‘मलाई विचलनका संगित नसुनाउ, म आँशु रोक्नै सक्दिन’ भन्थे। तर आवश्यक्ताले जन्माएको लेनीन बडो केन्द्रीयतावादी, एकदमै बोल्सेभिक। अझैँ उनले ज्याकोबिनको उदाहरण दिन्छन्।
त्यसो भएकाले हामीले बिनासन्दर्भ नबुझिकन नाराका रुपमा जनवादी केन्द्रीयता भन्दै आयौँ। तर कहिल्यै लागू गरेनौँ। हाम्रो देशको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा जनवादी केन्द्रीयता लागू भएको मलाई थाहा छैन। कुनै साथिलाई थाहा छ भने, मलाई समय दिएर एकदिन बुझाईदिनुस्। मोहनबिक्रमको अण्डरमा पनि काम गरियो, मोहन वेद्यको अण्डरमा पनि काम गरियो, अहिलेका चल्तापुर्ता नेताको मातहतमा पनि रहेर काम गरियो तर, जनवादी केन्द्रीता काहीँ देखिएन।
त्यसैले ‘सेल्फ अर्गनाइजेसन’ हुनुपर्छ । पहिले रुसीहरुले सत्ता शोभियतलाई देउ भन्ने नारा दिएका थिए। त्यसभित्र सिपाही पनि थिए, मजदुर पनि थिए, किसान पनि थिए। पछि विस्तारै शोभियतलाई दिएको सत्ता पार्टीले खोसेर लियो। हाम्रो यहाँसम्म आउँदा पार्टी नै ‘अल इन अल’ भयो। नेपालमा १५/२० वर्षयता विद्यार्थी आन्दोलन भयोभन्ने मैले सुनेको छैन। जतिसूकै अत्याचार भएपनि किसानको आन्दोलन हुँदैन। किनभन्दा, पार्टीले राजनीतिक समाजवादको जुन इन्जेक्सन दिएको छ त्यसले गर्दा सबै लठ्ठीएका छन्।
मलाई यस्तोवेला रोजाको सम्झना आउँछ। हाम्रा विद्यार्थीलाई हामीले संगठित नगरेको भए, पार्टीहरुले राजनीति नदिएको भए, आफै लड्थे होलान्। उनीहरुको अर्गानिक लडाई देख्न पाइन्थ्यो नि। अब महिलाले पनि आफ्नो अर्गानिक लडाई छोडे । किसानले पनि छोडे। यसरी सबै जनवर्ग हरुलाई हाम्रो कम्युनिष्ट आन्दोलन र हामीले भुत्ते बनाईदियौँ। त्यसैले मेरो प्रस्ताव के छ भने, अब कम्युनिष्ट पार्टीले महिला, मजदुर विद्यार्थी कसैलाई पनि संगठनात्मक रुपमा नेतृत्व गर्नुहुँदैन। उनीहरुलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ। महिला संगठनको अध्यक्ष कसलाई बनाउने भनेर जुंगामुठे नेताहरु बसेर निर्णय गर्नुहुँदैन। नेपाल ल क्याम्पसरमा कसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्ने तीस वर्ष अघि पढाइ छोडि सकेको व्यक्तिले निर्णय गर्नुहुँदैन।
त्यसैले रुसमा ‘सेल्फ अर्गनाइजेसन’ कसरी खतम भयो? कसरी भेंगार्ड पार्टी मात्रै रह्यो र पार्टी जनताबाट अलग्गीयो? त्यही चिज हामीले पनि लगातार अपनाउँदै आइरहेका छौँ। जस्तो अहिले हामी दुईवटा मुख्य पार्टीहरु एक ठाउँमा आएका छौँ। अर्कोतिर नेपाली कांग्रेस छ, जसले प्रजातन्त्रिक समाजवाद भन्ने गथ्र्यो त्यसले नै सबैभन्दा बढी मुलुकमा निजीकरण, व्यापारीकरणलाई प्रसय दियो। कांग्रेसले हाम्रो देशको सामाजिक अवस्था के हो भन्ने बुझेन, विचार गरेन। अमेरिका, अष्ट्रेलिया र बेलायतबाट दुईचार वर्ष पढेर आएकाहरुले यहाँ आएर लाहुरे गफ दिए, ‘त्यहाँ त सबै कुरा निजी क्षेत्रले गर्छ, निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ।’ राज्य असाध्यै बलियो भएको पश्चिम युरोप, राज्य असाध्यै बलियो भएको अमेरिका जहाँ एकजना कोही पसेको पनि थाहा पाउँछ, निस्केको पनि थाहा पाउँछ। तर, हाम्रो देश? अधिकांश पहाडी जिल्लाहरुमा सिडियो कहिल्यै भेटिदैन सुब्बा मात्रै भेटिन्छ, अधिकृत कहिल्यै भेटिदैन खडदारले चलाईरहेको हुन्छ। मुगु जानुस्, जुम्ला जानुस् या शंखुवासभा जानुस् ‘सिडियोसाप त अस्तिमात्रै जानुभयो आमा बिरामी भएर’ भन्छन् त्यहाँका खडदारले। फेरि त्यसको एकमहिना पछाडि गएर सोध्नुभयो भने पनि ‘अस्ति जानुभएको’ भन्छ। किनभने सिडियो कहिल्यै जिल्ला जाँदैजाँदैन, यही बस्छ। त यस्तो कमजोर राज्य भउको ठाउँमा निजिकरणले गर्दा जुन डामाडोल भयो, त्यो हामीले देखिरहेका छौँ।
म पुजिवाद, हामी समाजवाद। एकदम स्पष्ट छ। म सबैलाई उछिनेर त्यहाँ पुग्छु पुजिवाद, हामी सँगै त्यहाँ पुग्नेछौँ समाजवाद। त अहिले हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ र हामीभित्र के छ त?
अब रह्यो कम्युनिष्ट पार्टीको समाजवाद। हामी दुईवटा समाजवाद ल्याउँछौँ भन्ने पार्टी एकठाउँमा छौँ र हामीमा फेरि मोह अतितको देखिएको छ। जस्तो एउटाले भन्छ, ‘जबज। यसले समाजवादतर्फ लैजान्छ। शान्तिपूर्ण ढंगले, प्रतिस्पर्धा गरेर, प्रजातन्त्रिक ढंगले समाजवादमा जाने जबज।’ अर्कोले भन्छ, ‘होइन, जबज त माक्र्सवादी दृष्टिकोणमाथि उभिएकै छैन। यो त फेलियरहरुको कुरा हो। त्यसैले २१औँ शताब्दीमा जनवादको विकास।’ अहिले हामी सबैले समिक्षा गर्नुपर्ने एउटा गम्भिर प्रश्न आएको छ, ‘हामी कहाँ आइपुग्यौँ त अहिले?’ यो जबज वा २१ शताब्दीको जनवादको विकासले हामीलाई कहाँ ल्याइपुर्‍यायो त? हामी कुन ठाउँमा छौँ? हाम्रा सम्बन्धहरु कस्ता छन्? यसको एकदमै सजिलो उदाहरण चाहीँ चे ग्वेभाराले दिएका छन्, ‘पुजिवाद भनेको ब्वाँसोहरुको लडाई हो।’
म पुजिवाद, हामी समाजवाद। एकदम स्पष्ट छ। म सबैलाई उछिनेर त्यहाँ पुग्छु पुजिवाद, हामी सँगै त्यहाँ पुग्नेछौँ समाजवाद। त अहिले हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ र हामीभित्र के छ त? तीसौँ वर्षदेखि एउटै कमिटीमा सँगै काम गरेका मान्छेहरुमा कुनै भावनात्मक सम्बन्ध छैन। मलाई अहिले ४० हजार रुपैयाँ चाहियो भने पार्टीका कमरेडहरु होइन मावली, ससुराली, फूपूखाल सम्झिनुपर्छ। पार्टी कमरेडलाई सम्झिदैन। मैले पैशा चाहीँदा पार्टीका कमरेडहरुलाई सम्झिदैन भने मैले कमाएपछि सम्झिन्छु होला त? मसँग ५/१० करोड भयो भने यो राख्न पार्टीका कमरेडलाई दिउँ भन्छु त मैले? हो, अहिले यही स्थिति छ हाम्रो। हाम्रो आपसी सम्बन्ध यस प्रकारको छ। र यी सबै ठाउँमा कर्पोरेट हाउस हावि छ।
जुम्लाको कोही मान्छे सिमी र प्याज बेच्न आयो भने पनि उसलाई प्यान चाहिने जस्तो नियम बनाउँदै छ अहिले। यहाँ ठूला महलका बाहिरपट्टी ट्राफिक बाहिर बसेर गाडी मिलाइरहेको हुन्छ। तर, सानो दोकानको छेउमा मोटरसाइकल छेउमा रोकेर पसलभित्र छिर्नुभयो भने सिड्ढी बजाइहाल्छ। त्यो पुलिसले मलको सेवा गर्दैछ या जनताको? करिब ५ हजार पसल बन्न सक्ने ठाउँमा मलहरु बनेका छन्। पाँच हजार परिवारले खाने एउटा मलले एक्लै बेच्छ, एक्लै कमाउँछ। यस्तो अवस्थामा हामीलाई निर्देशन आएको छ, ‘पार्टीका कमजोरी कहीँ छन् भने खोज र तिनको बचाउ गर।’
क्युवाले पनि त्यही सुरुवात गर्‍यो र आज चमत्कार गरेको छ। आज संसारमा सबैभन्दा राम्रो स्वास्थ्यावस्था क्युवाको छ। किनभने उनीहरु हेल्थ सर्भिसमा गए, हामी हेल्थ इन्डष्ट्रिमा गयौँ।
चीनमा पनि र हामीले अन्ततिर पनि देखेकाछौँ। चीनमा माओत्सेतुङले ठूलो किसान जनमत छ भनेर देख्नुभयो। किसानै किसानले भरिएको छ चीन। यो किसानलाई मुक्त नगरेसम्म, यसलाई स्वतन्त्र नबनाएसम्म चीन अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यही भएर माओले खालि खुट्टे डाक्टरको अवधारणा ल्याएर आए। उनले गाउँका धामी झाँक्रिलाई पनि जम्मा गर्ने, र आधुनिक पढेको मान्छेलाई पनि पुर्‍याइदिने । तिनीहरुले मिलेर मेडिकल सिस्टम बनाए। समुदायले आर्जन गरेको ज्ञानलाई पनि नष्ट गरेनन्, आधुनिक मान्छेलाई पनि राखेर उनीहरुले सुरु गरे। पछि क्युवाले पनि त्यही सुरुवात गर्‍यो र आज चमत्कार गरेको छ। आज संसारमा सबैभन्दा राम्रो स्वास्थ्यावस्था क्युवाको छ। किनभने उनीहरु हेल्थ सर्भिसमा गए, हामी हेल्थ इन्डष्ट्रिमा गयौँ। केही दिन अघि डाक्टरहरुको सेमिनारमा अब डाक्टरहरुको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै थियो। पहिले बिरामीले डाक्टर देख्दा यो मलाई बचाउन आयो भन्ने सोच्थ्यो, अहिले बेहोस बिरामी पनि डाक्टर आफ्नो घरबार खान आएको भन्ठान्छ। यो स्थानसम्म देशलाई जबजले ल्याइपुर्‍याएको हो? कि त भन्नुपर्‍यो के भने ‘नेतालाई भित्तामा राखियो र नाम जपियो तर जबजलाई व्यावाहारमा उतारिएन।’ होइन जबज लागू गरेर फेरि माथि भनेकै अवस्था आउने हो भने, समाजवाद त कहीँ देखिदैन। हामी र कांग्रेस उस्तै देखिने, हामी राप्रपा उस्तै देखिने। भनेपछि फरक के भयो? अर्कोतर्फ २१ शताब्दीमा जनवादको विकासको जुन स्प्रीट थियो त्यो के लागू भयो त? लागू भएर फेल भएको भएत एउटा ठूलो लेसन हुन्थ्यो।
त्यसैले युवाहरु, हामी हिजो सामान्तवादका विरुद्ध लड्यौँ। अब तिमीहरु पुँजीवादका विरुद्ध लड। किनभने, पुँजीवाद चरम अमानविय छ, यसले पृथ्वीलाई नष्ट गरिदिनेछ र यो ग्रहलाई नै सिध्याई दिनेवाला छ।